किन एक टुक्रा इंजेक्शन मोल्ड TPE कार म्याट बनाउन मा जोर?
चीनलाई सधैं विश्वको कारखाना भनिन्छ। चीनको व्यापक आर्थिक मजबुतिको सुधारका साथ विशाल बजार सम्भावनाले चिनियाँ बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको लागि हेर्नुपर्ने बनाएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू चिनियाँ बजारमा हतार गरे र चिनियाँ अटो उद्योगलाई प्रमोट गरे। आपूर्ति उद्योगको विकासको साथ, विश्व कारखाना अटो नेटवर्कले चिनियाँ अटो उत्पादनहरूको प्रकार समायोजित गर्दछ। चीन विश्वव्यापी अटोमोबाइल आपूर्तिका लागि भेला हुने ठाउँ भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय खरीददारहरूको लागि मुख्य स्थान भएको छ।
अटो खपतको अपग्रेडिंगको साथ, अटो आपूर्ति बजारलाई अनुगमन गर्न नयाँ उत्पादनको उत्पादन पनि आवश्यक पर्दछ। हामीले TPE इंजेक्शन मोल्डिंग वातावरणमैत्री पैदल प्याडहरू परिचय गरायौं, र जर्मन र अस्ट्रियन TPE कार फुट प्याडहरूलाई जन्म दियौं, जसले कार मालिकहरूलाई स्वास्थ्यकर र सुरक्षित ड्राइभि experience अनुभव ल्यायो!
सबै भन्दा पहिले, ईन्जेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया र छाला प्रक्रिया बीचको भिन्नता बारे कुरा गरौं:
१: कच्चा मालमा फरक
इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया १००% शुद्ध TPE सामग्रीको साथ विकसित गर्न आवश्यक छ, र छाला प्रक्रिया प्राय TPO वा TPV जस्तो TPE यौगिकाहरूसँग मिसिन्छ, र छालाको शुद्धता इन्जेक्शन मोल्डिंग जत्तिकै राम्रो छैन। तसर्थ, एक-टुक्रा इंजेक्शन-मोल्ड पूर्ण TPE कार मैटमा अधिक लचिलो बनावट, रबरको नजिक, र राम्रो खुट्टाको अनुभव हुनेछ। छाला टेक्नोलोजीले बनेका उत्पादनहरू कडा हुन्छन्, प्लास्टिक जस्तै, र लामो दूरी ड्राइभिंग गर्दा थकित महसुस गर्दछ।
२: स्थायित्वमा भिन्नता
इंजेक्शन मोल्ड TPE फुट प्याड लचिलोपन छ। प्रयोगको पछिल्लो अवधिमा यो विकृत भएपछि यसलाई उमालेको पानी खन्याएर वा निश्चित समयावधिमा सूर्यमा प्रकाश दिन यसको मूल आकारमा पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ।
DEAO कार मैट विकृति परीक्षण: एक्सपोजरको केहि घण्टा पछि मूल आकार पुनर्स्थापित गर्नुहोस्।
छाला प्याडहरू 1-2 वर्ष प्रयोग पछि कर्ल हुनेछ र पुनर्स्थापना गर्न सकिदैन।
दुई बीचको विशेषता भिन्नता आउँदछ:
इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रियाको कच्चा माल इंजेक्शन मोल्डिंग मेशिनमा छिराइन्छ र मोल्डमा आकार दिनुभन्दा पहिले उच्च तापक्रममा तरिकार हुन्छ।
छाला प्रक्रिया पहिले सामग्रीलाई सपाट पानामा बनाउनु हो, र त्यसपछि यसलाई न्यानो पार्नुहोस् र यसलाई तताउन र आकार दिनको लागि मोल्डमा अवशोषित गर्नुहोस्।
इंजेक्शन बराबरको उत्पादनको उत्पादको आकार पनि हुन्छ, जबकि ब्लास्टर उत्पादनमा मोल्ड गरिएको आकारको केवल एक पक्ष हुन्छ, र प्राकृतिक रिकभरी पहिले भन्दा धेरै कम हुन्छ।
कार मालिकहरूको लागि छाला कार मैटहरू।
:: स्टाइल डिजाइनमा भिन्नता
डबल-लेयर विशेष ईन्जेक्शन मोल्ड प्रयोग गर्ने फाइदा भनेको सतह बनावट अझ विस्तृत रूपमा डिजाइन गर्न सकिन्छ, जसले डिजाइनरहरूलाई अझ रचनात्मक ठाउँ दिन्छ।
हामीले प्रत्येक ब्रान्डका लागि विशेष बनावट डिजाइन गरेका छौं, र विवरणहरू अझ धनी छन्, र प्रत्येक बनावटको पछाड मोडेल प्याटेन्ट रहेको छ।
छाला मोल्डले केवल साधारण रेखाहरू बनाउन सक्छ, उस्तै।
:: बकल डिजाइनमा भिन्नता
इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया द्वारा डिजाइन गरिएको डबल-लेयर बकल अधिक टिकाऊ हुन्छ। खुट्टा प्याडको तल अतिरिक्त एन्टि-विकृति स्टिफेनरहरूको साथ डिजाइन गरिएको छ। बक्सल पनि सानो सानो-सटीक मोल्डबाट मिल्छ, जुन बलियो छ।
यद्यपि छाला प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा पातलो छ। यदि डबल-लेयर बकसुल डिजाईन गरीएको छ भने, कार मैटको शक्ति र स्थायित्व ठूलो परीक्षण हो। यो एउटा कारण हो किन सबै विदेशी ब्लास्टर कार म्याटहरू एक डबल-लेयर डिजाइन छैन।
अन्तमा, किन डीओओले एक टुक्रा इंजेक्शन मोल्ड गरिएको TPE बनाउने कुरामा जिद्दी गर्दछ कार चटाईs?
किनभने डीईएसँग सधैं कारको म्याटको विकासमा धनको अनुभव रहेको छ! हामी बहुमत कार मालिकहरूमा राम्रो कार म्याटहरू ल्याउन चाहन्छौं। केवल कार कारखाना स्तर एकीकृत इंजेक्शन-मोल्ड पूर्ण TPE कार मैटहरूले वास्तवमै वातावरण मैत्री र गन्ध रहित ड्राइभिंग अनुभव ल्याउन सक्छ।